काठमाडौं, १९ कात्तिक । लोकतन्त्रमा जनता नै भाग्यविधाता हुन् । आफ्नो शासक र शासन नागरिकले नै चुन्छन् । प्रक्रिया भने अलग-अलग हुन्छन नै ।
अमेरिकाको कुरा गर्दा यहाँ अहिलेसम्म पाँचजना उम्मेदवारहरु लोकप्रिय मत नआउँदा पनि निर्वाचन प्रणालीका कारण जितेका छन् । अमेरिकाकामा इलेक्टर्स वा इलेक्टोरल कलेज वा जनप्रतिनिधिले राष्ट्रपति चुन्ने चुनावी प्रणाली विद्यमान छ ।
यहाँ लोकप्रिय मतले अर्कैलाई राष्ट्रपति चुने पनि निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनाव जितेका ५ राष्ट्रपतिहरुबारे चर्चा गरिनेछ ।
अमेरिकामा अहिले ५८औं राष्ट्रपति चुनाव जारी छ । ५३ पटक चुनाव जितेका राष्ट्रपतिहरुसँग लोकप्रिय मत र इलेक्टोरल भोट दुवै बढी पाए । तर केवल ५ पटक भने त्यस्ता व्यक्तिहरु राष्ट्रपति बने जसले लोकप्रिय मत पाएनन् तर जनप्रतिनिधि भने बढी पाए ।
जोन क्विन्सी एडम्स (१८२५-२९)
यो चुनावमा दुई पार्टीका दुई-दुई अर्थात् कुल चार उम्मेदवार थिए । उनीहरुकव नाम थियो- एन्ड्रयु ज्याक्सन, जोन क्विन्सी एडम्स, विलियम क्राफर्ड र हेनरी क्ले ।
यो अमेरिकी संविधानमा १२औं संशोधनहुनु भन्दा अगाडिको कुरा हो । मतपरिणामलाई लिएर हाउस रिप्रेन्टेटिभहरुबी छलफल भयो । नियमअनुसार, अत्यधिक मत ल्याउने ३ क्यान्डिडेट चुनिए । हेनरी क्ले दौडबाट बाहिर गए । हाउसमा मतदान हुँदा एडम्स राष्ट्रपति चुनिए ।
रदरफोर्ड बी. हायेस (१८७७-८१)
यहाँ पनि एडम्सको जस्तै विवाद निस्कियो । मतदाताको कारण कांग्रेसले फैसला गर्‍यो । रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट रदरफोर्ड बी. हायेस और डेमोक्रेट्सको तर्फबाछट स्याम्युअल टिल्डेन उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला टिल्डेनलाई १८४ इलेक्टोरल भोट पाए । जुन त्यतिबेलाको बहुमतभन्दा एक कम थियो । हायेसले १६५ भोट पाए । २० भोटमा विवाद भयो । संवैधानिक संकट नै देखियो । कांग्रेसले एक आयोग बनायो । किनकी दुई पार्टीहरुको २० विवादित भोटमाथि दावी थियो । यसले २० भोट हायसलाई दियो । उनी केवल एक भोटले चुनाव जिते । केही राजनीतिक इतिहासकारहरुका अनुसार दुवै पार्टीबीच केही गोप्य सम्झौता भए पछि हायेस राष्ट्रपतिमा चुनिएका हुन् ।
बेञ्जामिन ह्यारिसन (१८८९-९३)
सन् १८८८ मा को राष्ट्रपति पदका लागि भिडन्त ग्रोबल क्लिभल्याण्ड र रिपब्लिकन क्यान्डिडेट बेञ्जामिन ह्यारिसनबीच थियो । दुवै पार्टीमाथि नोट दिएर भोट बदलेको आरोप लाग्यो । उनीहरुले पैसा खर्च गरेर मतदाता किनेको आरोप खेपे । दक्षिणी राज्यमा डेमोक्रेट्स जबकि पूर्व र पश्चिममा रिपब्लिकनले जित्यो । क्लिभल्याण्डले ह्यारिसनभन्दा ९० हजार लोकप्रिय भोट पाए । तर, इलेक्टोरल भोट ह्यारिसनको २२३ थियो भने क्लिभल्याण्डको केवल १६८ भोट थियो । ह्यारिसन राष्ट्रपति बने ।
जर्ज डब्लु बुश (२००१-२००९)
ह्यारिसनको इतिहास ११२ वर्षपछि दोहोरियो । नोभेम्बर २००० मा भएको प्रतिस्पर्धा थियो रिपब्लिकन उम्मेदरवार जर्ज डब्ल्यु बुश (बुश जुनियर) र डेमोक्रेट अल गोरबीच । गोर बिल क्लिन्टनको प्रतिस्पर्धामा उपराष्ट्रपति थिए । ओरेगन, न्यु मेक्सिको र फ्लोरिडामा विवाद निस्कियो । फ्लोरिडामा दोस्रोपटक मतगणना भयो । मुद्दा पहिला फ्लोरिडा अदालत र पछि सर्वोच्च अदालत पुग्यो । ९ मध्ये ५ जज बुश र ४ गोरको पक्षमा रहेको फैसला भयो । इलेक्टोरल कलेजमा २७१ भोट बुशलाई र २६६ भोट गोरलाई आयो । उता, लोकप्रिय मत ५ लाखभन्दा बढी गोरको पोल्टामा थियो ।
डोनाल्ड ट्रम्प (२०१६-२०)
यो गत चुनावको कुरा हो । लोकप्रिय मतमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निकै पछाडि थिए । डेमोक्रेट उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई ट्रम्पलाई भन्दा २८ लाख बढी लोकप्रिय मत आएको थियो ।
क्यालिफोर्निया र न्यूयोर्कमा उनले शानदार प्रदर्शन गरिन् । तर, विस्कन्सिन, पेन्सिलभेनिया र मिशिगनमा झिनो अन्तरले ट्रम्प अगाडि आए । इलेक्टोरल कलेजको भोट गन्दा ट्रम्पको ३०४ थियो भने हिलारीको २२७ मात्र ।